Faah-Faahin: Guddoonka Baarlamaanka ee Golaha Shcabka iyo Aqalka Sare oo kala saxiixday heshiis wada-shaqeyn ah – Kalfadhi
Labada Gole ee Baarlamaanka Dowladda Federaalka ee Soomaaliya, ayaa bil ka hor waxaa hareeyay khilaaf, kaas oo horseeday wada-shaqeyn la’aan. Inkasta oo labada Aqal ay shegeen in ay heshiiyeen, haddana waxaa muuqatay gaabis wada-shaqeyn ah.
12-kii bishan Oktoober, labada Gole ayaa si wada-jir ah usoo saaray warqad ay ku cadeynayaa in ay heshiis gaareen. Tifaftirayaasha Kalfadhi ayaa fahansanaa in khilaafka labada gole uu salka ku hayay safaradda dalka dibadiisa loo aado, iyo in si hoose loola dhaqo Aqalka Sare ee Baarlamaanka.
Haddaba qodoka 3-aad ee ku xusan heshiiska ay soo-saareen, waxaa ku cad in labada gole ay ku heshiiyeen in ay qeyb-sadaan xubnaha ku metelaya shirarka Baarlamaannada ee ka dhacaya Gobolka iyo Adduunka intiisa kale.
Dhinaca kele, Golaha Shacabka iyo Golaha Aqalka Sare waxay ku heshiiyeen in ay yeeshaan xeer hoosaad wadajir ah, kaas oo faahfaahinaya dhammaan arrimaha la xiriira qodobbada lagu heshiiyay guddiyada wada-jirka ah, habraaca guud ee isu-gudbinta hindise-sharciyeedyada, iyo xiriirada gudaha iyo dibedda ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Guddoomiye ku xigeenka 1aad ee Aqalka Sare iyo xildhibaanno oo gaaray Kismaayo